कांग्रेस जिल्ला सभापतिमा खड्काको चर्चा – खुल्लापाना
नेपाली कांग्रेसको चौधौैँ महाधिवेशनका लागि वडा तहदेखि जिल्ला र केन्द्रसम्मको नेतृत्वको लागि आकाक्षींहरू प्रचारमा लागिसकेका छन् । चुनावी सरगर्मी बढेसँगै इलाममा भने जिल्ला अध्यक्षमा डम्बर खड्काको चर्चा चुलिएको छ ।
चुनावी सरगर्मी बढेसँगै जिल्लाका नेताहरुले विभिन्न पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दावी गर्न शुरु गरेका हुन् । जिल्ला सभापतिमा आकाक्षीं धेरै रहेपनि इलाममा भने युबा नेता डम्बर खड्काको चर्चा चुलिएको हो ।
को हुन डम्बर खड्का ?
इलाम जिल्ला इलाम नगरपालीका वडा नं ७ स्थायी घर भएका डम्बर खडका बाल्यकाल देखि नै राजीनतीमा चासो राखदै २०४१ सालमा इलाम सदरमुकाम स्थीत आर्दश मा वि को ने बि संघ इकाइ समितिको सभापति बनेका थिए । बिधार्थी जिवनमा रहदा पनि पाटी र भातृसंगठन प्रति निरन्तर लागीरहने क्रममा २०५१ साल देखि २०५८ साल सम्म निरन्तर नेबि संघ इलामको जिल्ला सभापतीको जिम्वेबारी पुर्वक समालेका थिए । यस्तैे २०५८ सालमा खड्का नेबिसंघको केन्द्रिय सदस्यमानिर्वाचित बने । यसरी बिद्यार्थी राजनीतिक गर्ने क्रममा डम्बर खडका युवा र बिद्यार्थी माझ लोकप्रियताको कारण २०६४ सालमा ने बि संघको निर्वाचित केन्द्रिय उपाध्यक्ष बन्न पुगे । २०६९ साल सम्म नेपाल बिद्यार्थी संघको जिम्वेबारी सम्हाले पछि बाहौ्र अधिवेशनबाट जिल्ला कोषाध्यक्ष, महाधिवेशन प्रतिनिधी र तेहौं महाधिवेशनमा इलाम जिल्लाको सभापति पदका प्रत्यासी बने भने यसपछि भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट इलाम क्षेत्र नं २ को प्रदेश १ (क) मा प्रदेश सभाको उमेद्धवार बने तर उपबिजेता बन्न पुगे । तर पनि उनमा कुनै परिबर्तन भएन उपबिजेता बन्दा पनि अझ उनमा काम गर्ने हौसला जागरुप भयो । अहिले उनि नेपाली काँग्रेस खेलकुद समन्वय बिभागका केन्द्रिय सदस्य रहेका छन् । नेता खडका निर्वाचनमा उपबिजेता बने सँगै निरन्तर जल्लाभर पाटी संगठन बिस्तार र सुदृढिकरणका लागी सकृय रँहदै आएका छन ।
किन जिल्ला सभापतिमा खड्का नै आवश्यक्ता ?
राजनिती पेशा होइन सेवा हो भन्ने मुल मन्त्र ठान्ने खडका इलामेली जनताका हरेक सुख दुखका सारथी हुन । आर्थिक अभावले घरमा चुला नबल्ने देखि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेका बिरामी तथा असाहय गरीब दुखिहरुलाइ समेत उनले निरन्तर सहयोग गरीरहेका छन । सबै जात धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण हामीले गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने खडकाले जिल्ला भर निमार्ण भएका मठ मन्दिरमा धातुको मुर्ति पदस्थापन गर्ने देखी गुम्बा र चर्च निमार्णमा समेत आवश्यक सहयोग गर्दे आएका छन । जिल्लाभर आयोजना हुने खेल्कुद प्रतियोगितामा प्रोत्साहन स्वरुप प्रथम तथा दितिय पुरस्कार राखेर युवाहरुलाइ हौसला प्रदान गर्ने खडकाको सहयोगमा गाँउघरमा सडकको स्तर उन्नती लगायत काम भएका छन । गरीब दुखिकै सेवा गरिरहेका खड्का राष्ट्रिय सम्मान बाट सम्मानित समेत भईसकेका छन । त्यसैले पनि अबको आवश्यक्ता खड्का नै रहेको आम मतदाताको भनाई छ ।
१५ हजार बडि क्रियाशिल सदस्य रहेको इलाममा रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको आगामी साउन १२ गते वडा तहमा अधिवेशन हुँदैछ । वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि वडाबाट चयन हुनेछन् । साउन १६ गते हुने पालिका अधिवेशनबाट पालिका कार्यसमितिहरु चयन हुनेछन् । साउन २० गते क्षेत्रको प्रदेश समितिको अधिवेशनले प्रदेश कार्यसमिति, प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नेछ । साउन २३ गते हुने क्षेत्रको अधिवेशनले क्षेत्रीय कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य चयन गर्नेछ । यस्तै साउन २६ गते हुने जिल्ला अधिवेशनले जिल्ला कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।